Ukuba ngaphambi kokuba umtshato usebenze kwinkqubo ethile, apho iingcali ziye zaphuhliswa, ngoko uya kubonakala ngcono kunexesha elizayo, oomatshato kunye nabangaphambili. Le nkqubo yenzelwe iintlobo ezahlukeneyo zeminyaka, ngoko-nganye yesini esilungileyo iya kufumana iziphakamiso zokunakekelwa kweenwele, umzimba kunye nobuso phambi komtshato. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba yonke into ongeyitshintshiyo, awugcini nje ukucima wonke umntu, kodwa ukuze uzive ukhululekile kwaye uziqhenyce ngokwakho, ukuba ubizwa ngokuba ngu-mkakazikazi wokubhiyozela. Ngaphezu koko, uya kukhangeleka kungekudala nje ngosuku lwakho lomtshato, kodwa nangona ixesha elide emva kwalo.
Ukuba sineminyaka engama-20 ubudala
Kwiinyanga ezili-10 ngaphambi komtshato.
Ukuba uneminyaka engama-20 okanye ngaphantsi kwe-20, ngoko imetabolism yakho isebenza kwaye ukuba unesisindo esingaphezu koko, kuya kuba lula ukumelana nayo. Kungcono ukunciphisa ubunzima kwinyanga engama-2 kg kwaye ke uqhubeke uze ufikele umgomo wakho. Ukuze ufezekise umphumo oyifunayo, kufuneka wenze i-aerobics isigama seyure 4-5 amaxesha ngeveki. Ukuze uphumelele kwisiphumo esihle, kufuneka wenze enye indlela osebenza ngayo. Kwaye ukwenzela ukwandisa umphumo, kufuneka wenze okungakumbi kwaye usebenzise ukuqeqesha amaxesha amathathu ndiya kuwenza. Ngaphezu koko, kuyimfuneko ukukhuphela ngaphandle komgubo wase-Italy, otyetyisiweyo kunye othosiweyo. Kungcono ukuxhomekeka kwiziqhamo, intlanzi kunye nemifuno. Ubunzima obungaphantsi kwama-2 ilitha amanzi ngosuku.
Kwiinyanga ezili-6 ngaphambi komtshato . Yithatha imo epheleleyo ye-brew.
Ngokuqhelekileyo xa abantu bekhangele ubuso bakho, baqwalasela ngokukhawuleza iinki. Yiya kwiingcali eziza kugqiba ukuba yeyiphi i-armor efanelekileyo, kwaye uzama ukuhamba kanye ngenyanga ukuze ulungiswe. Ukundwendwela kokugqibela kumphathi weehlo kufanele kube ngomhla womtshato.
Kwakukho ixesha apho wonke umntu athatha iimbombo nge-wax waza wavula i-brow, kodwa ngoku ayikho imfashini. Kwaye kule minyaka, iinki zakho ezine-arc ezithandekayo zikhangeleka zendalo kwaye zikhangeleka.
Kwiinyanga ezintathu ngaphambi komtshato . Kwiveki nganye, yenza umquba.
Ukuba uhlala unika ixesha elifanelekileyo lezipikili - uyabanyamekela, ngoko ayiyi kudiliza, iya kuhlukanisa, kwaye ukubonakala kwazo kuya kuphucula amaxesha amaninzi. Ngaphezu koko, ngoko awukwazi ukubethelela izipikili zakho kwimitshato yomtshato. Enye inzuzo: unako kwiinyanga ezintathu ukuthabatha i-khyllak kunye nomzekelo oyithandayo kwaye uhambelana. Ukuba ufuna ukwenza intsimbi yaseFransi, yenza njalo. Iingcamango ezilungileyo, nje iingcebiso zombala azimhlophe, kodwa zizinzile. Ngendlela, nanamhlanje ungaya kumphathi, ukwenzela ukuba wenze izipikili zakho kakuhle.
Kwiinyanga ezimbini ngaphambi komtshato . Ukucoca ulusu nge-salicylic acid.
Ukuba isikhumba sakho sithandeka kwiimpuphu kunye ne-acne, yonke imihla, uhlambe ngamanzi, apho kufuneka uqale ungeze amaconsi ambalwa e-salicylic acid nesulfure. Ngoko isikhumba sebhaktheriya siya kuba sincinci, kwaye umxholo weoli uyancipha. Kodwa kufuneka ukhumbule ukuba isikhumba se-otasalicylic siba nesicatshulwa, ngoko kufuneka wenze ubuso bokusilalisa imihla ngemihla kwaye uhlale usebenzisa i-sunscreen.
1 inyanga. Yinyamekele iinwele zakho .
Naluphi na i-hairstyle ekhangeleka kakhulu kwizinwele ezilungele kakuhle, ngoko-ke uthenge i-shampoo eqinileyo, kwaye rhoqo wenze iimaski ukuqinisa iinwele.
Usuku lomtshato . Cinga u omakiyazhe.
Kungcono ukwenza ukwakheka kwemvelo okugxininisa ubutsha bakho nobuhle. Thatha isiseko se-fat-matt base kunye ne powder evulekileyo. Baya kukunceda.
Ukuba uneminyaka engama-30 ubudala
Kwiinyanga ezili-8 ngaphambi komtshato . Namela ingxowa.
Ngokuhlwa, sebenzisa ukhilimu onxamnye ne-vitamin A ebusweni bakho. Oku kuya kuthintela imibimbi ephuma kwilanga.
Kwiinyanga ezili-6 ngaphambi komtshato . Jonga izandla zakho.
I-Collagen isele iveliswe kungekho kwiminyaka engama-20, ngoko isikhumba sibe some kwaye sincinci. Kubalulekile ukuphucula kunye nokukhusela izandla ngezityalo ezinesondlo kunye ne-vitamin E.
Kwiinyanga ezi-5 ngaphambi komtshato .
Ukuba unamabala obudala okanye ukhathazekile nge-pigmentation ye-hormonal okanye iingxaki zombala wesikhumba, ngoko kufuneka uzame i-cream remover cream. Kufuneka i-smeared on stains for 3-5months.
Kwiinyanga ezine ngaphambi komtshato . Ukubandakanya uqeqesho lwamandla.
Ukuba udinga ukunciphisa ubunzima, ukuqeqeshwa kwamandla makube ngumsebenzi wakho oyintloko. Ukuqeqeshwa kwe-Aerobic akusayi kunika umphumo onjalo, ngoko kuyafaneleka ukuqonda ukuqeqeshwa kwe-cyclic, kuya kuphucula izinga lentliziyo kunye nemisipha ye-podkachaet. Iyakwazi ukuxumla kwintambo, ukuzisebenzisela i-triceps, isebenza kwindawo kunye nokuphakamisa i-dumbbells. Kulo qeqesho ngalunye kuyimfuneko ukuphinda le mijikelezo kathathu.
Kwiinyanga ezintathu ngaphambi komtshato . Qinisa zakho iinwele.
Emva kokuba i-hormone iguqulwe, ithetha ukuba iinwele azizange zime, zingabomile kwaye zingenasiphelo, ingakumbi ukuba uyazipenda njalo.Thola ama-air conditioners akhethekileyo kunye nemaski ukuqinisa iinwele zakho. Sekuqaleni kweenwele zenyanga kuya kuqala ukukhanya. Ukuba iinwele zilungile, ke unokunyamekela, kuba ngexesha ixesha le-estrogen liyancipha.
1 inyanga ngaphambi komtshato . Kubalulekile ukucinga yonke into.
Gwema iimeko ezixinzelelekileyo. Phantse iiveki ezingama-2-3 ngaphambi kokubhiyozela, yenza umyalelo womdaka obushushu ngobuso. Ngoko ucoceke iipilisi zokungcola, kwaye akuyi kuba namacenge. Nangona kunjalo babonakala, ngoko nangoko bathambise ikhefu ekhethekileyo ngaphandle kwe-benzene peroxide. Ngoko isikhumba sakho siya kubuya ngokukhawuleza.
Musa ukwenza ukwakheka okukhanyayo-ubuso bufanele bube butsha kunye nolutsha. Sebenzisa i-podvodkoy, pheqa amehlo. Ngaphantsi kwe-cheekbones nanesitemativy ukukhanya kwemvelo, kunye nokusebenzisa ukuma okomileyo kunye neentsimbi zokubeka umlomo ngeetoni ezingamathandabuzo.
Ukuba uneminyaka engama-40 ubudala
Kwiinyanga ezili-8 ngaphambi komtshato . Retinolomesto ubuyisele isikhumba.
Ngokuhlwa, gcoba isikhumba ngekhilimu kunye ne-retinol, eya kukunceda ukususa iindawo ezibangelwa ilanga.
Kwiinyanga ezili-6 ngaphambi komtshato .
Kungcono ukwenza iipilati okanye i-yoga. Ukomelela, ubuncinci kwaye ulungele ukwenza inkqubo edibanisa izenzo zokuguquguquka, u-aerobics nokuqeqeshwa kwamandla. Ukuguquguquka kubaluleke ngokukhethekileyo kwiminyaka yakho, kuyiluncedo kumalungu.
Kwiinyanga ezine ngaphambi komtshato . Thenga ubusuku kunye nekhrimu yosuku.
Emva kweminyaka engama-40, ulusu olujikeleza amehlo luba lukhuni ngakumbi, lube lucwebile kwaye lome. Ukuze ukhethe ukhilimu ngosuku kunye nomxholo we-birch emhlophe uyakulungele. I-ayisikhilimu yasebusuku ibhetele ukukhetha umkhiqizo ngeekeramide, lentin kunye nevithamini A kunye noC.
Kwiinyanga ezintathu ngaphambi komtshato . Thabatha ingqalelo emilonyeni yakho.
Nsuku zonke amaxesha aphindwe kabili emlonyeni wakho ngomlomo.
Kwiinyanga ezimbini ngaphambi komtshato . Yithi hayi kwiintlanzi zakho zezinwele.
Ngoku ukhululekile kakhulu ngomfanekiso weklasi. Unokwenza i-fringe, iya kukufihla ukusilela kwakho, umzekelo, imibimbi ebunzini. Yabona ukuba iinwele zakho zincinci kwaye zilungele kakuhle.
1 inyanga ngaphambi komtshato . Cinga ngento yokwenza.
I-Nestoit ukusebenzisa ipowder, kukulungele ukufumana isiseko se-tonal cream, ngcono kukuguqula iimpazamo. Kubandakanywa izibonda phantsi kwamehlo.
Kwiiveki ezimbini phambi komtshato . Moisturizer.
Sebenzisa i-wax efudumele ebusweni ukuze uqine iindawo eziphezulu zesikhumba uze ususe ukukhangela. Ukuba unesikhumba esomileyo, ufumane ukhilimu obusondeza ubusuku.
1 ngeveki ngaphambi komtshato . Ukunyamekelwa kweenyawo.
Ukuba usemtshatweni kwimpahla okanye igqoko apho imilenze ivuliwe khona, uze ukhanyise isikhumba seenyawo zakho ngezilwanyana zaselwandle okanye uthembe i-cosmeticist.
Usuku ngaphambi komtshato . Yakha ukukhanya kunye nomthamo.
Emva kweenwele ezingama-40 ziba nzima kwaye zincinci. Ngoko ke, hlamba intloko yakho nge-shampoo kunye ne-pantynol ukuze unike iinwele zakho zikhulu.
Usuku lomtshato . Ngaphambi kokuba wenze isicelo sokwenza izicwisi, ncitshisa isikhumba.
Ngaphambi kokuba wenze isicelo sokwenza izixhobo, sebenzisa i-dose ephindwe kabini yesincomo esondlo, uhlawule ingqalelo kwiidama kunye nesikhumba phantsi kwamehlo. Sebenzisa i-peach, i-pink-brown okanye i-honey tones kwizihlathi kunye namehlo. Oku kuya kugxininisa umgca wenkulungwane. Izindebe ze-Avot zigqatshelwe ngokugqithiseleyo nge-berry ebomvu yombhobho okanye usebenzisa i-lipstick yakho eyintandokazi.
Umtshato wase-Orange: umqubuzelo weentente ezishisayo
Umtshato waseLilac: ukutshatyalaliswa komtshato kunye nokucocwa
Myalelo i-limousine yomtshato
Yiyiphi indoda oyifunayo ukuze usayine i-zodiac?
Indlela u-Anastasia Volochkova ubheka ngayo ngaphandle kwefotohop, iifoto ezitshaqisayo kunye namavidiyo
Imiqondiso yenhlanhla iFeng Shui
Imihla yeenwele ezivela kwisaphetha
U-Nikita Dzhigurda wahlela ukusebenza kwi "Live"
Indlela yokuyeka ukulungiswa kweenwele
Indlela yokukhetha i-bouquet yomtshato
Ziziphi iipilisi endingazithatha ngexesha lokukhulelwa?
Iiglasi ze-Aviator: i-accessory yintombazana enesithambiso
Ikhishi elingaphakathi kwekhitchini
UDana Borisova watshata ngasese waza wachaza ukuba wakhe umlingani ebomini
Isaladi kwiintlobo ezahlukeneyo zeembotyi